जुम्लाको प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य शान्ती स्तुपा कस्तो छ ?
| 2018-11-01 Published
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जुम्ला जिल्ला हिमाली क्षेत्र तथा कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन हब भएको बताए ।
जुम्लाका अथाह पर्यटन सम्भावनाले अवसर खाजेको र तीनै तहको सरकारले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्यटनमन्त्री अधिकारीले दाबी गरे ।
जुम्लालाई पर्यटकीय शहरुका रुपमा विकास गर्ने योजनालाई प्रथामिकताका साथ अघि बढाउन समेत पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।
जुम्लाको पर्यटकीय सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको समेत उनको तर्क थियो ।
जुम्लामा निमार्ण देशकै ठुलो शान्ती बौद्ध स्तुपा उद्घाटनको लागि जुम्ला पुगेका पर्यटन मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कर्णाली समृद्धीका लागि पर्यटन प्रबद्धनको विकल्प नरहेको समेत दाबी गरे । जुम्लाका पर्यटन सम्भावाना लाई उजागर गरी आर्थिक कमाउन सकिने, रोजगारी सृजना गर्न सकिने सुनाए ।
देशकै सबै भन्दा ठुलो शान्ती स्तुपाको बुधबार एक भव्य कार्यक्रमका साथ मन्त्री अधिकारीले उदघाटन गरेका हुन् । शान्ती स्तुपा जुम्लाको प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्य हो ।
स्तुपाले पर्यटक तान्ने विश्वास लिएको मन्त्रीले बताए ।
जुम्ला भाषा र सस्कृतिको जननी भएको भन्दै बौद्ध स्तुपा निर्माणले समावेशीतालाई झल्काएको भन्दै उनले कर्णालीमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउनका लागि हवाई, स्थलमार्गको स्तारोन्नतीको लागि पनि मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाउनले प्रतिवद्धता व्यक्त समेत गरे ।
जुम्लाका तातोपानी, गुठिचौर, चन्दननाथ भैरबनाथ, पाण्डवगुफा, कनकासुन्दरी, लगायत राराको लागि गुरुयोजना बनाएर सरकारले काम गर्ने र कर्णालीमा पर्यटन समृद्धि हासिल गरिने दाबी मन्त्रीको छ ।
कस्तो छ स्तुपा ?
विश्व दिगो शान्तिको कामना गर्दै जुम्लामा देशकै ठुलो बौद्ध शान्ति स्तुपा निर्माण गरिएको हो ।
जुम्ला र मुगुमा बस्ने मुगाली समुदायद्धारा चन्दननाथ नगरपालिका–४ सिंगाचौरमा झण्डै ७२ फिट अग्लो र ३२ फिट चौडाईको स्तुपा निर्माण भएको छ ।
विगत तिन दिन देखि स्तुपामा विश्व दिगो शान्तिको कामना तथा अभिषेक कार्यक्रममा शरण विनायक धर्म गुरु रब्ज्याम रिन्पोछेन्युद्धारा प्रबचन दिईरहेका छन् ।
२०६८ सालबाट निमार्ण सुरु गरिएको स्तुपाको हाल सम्पुर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
स्तुपा निर्माण कार्यमा झण्डै ३० करोड रकम खर्च भएको छ । प्यागोडा शैलीमा निमार्ण गरिएको स्तुपा निर्माण गर्दा नुनदेखि सुनसम्मका सामाग्री प्रयोग गरिएका छन् ।
हिंसा नहोस् भन्नका लागि हतियार, तरबार तथा भोकमरी नहोस् र उत्पादन बृद्धिहोस् भनेर स्तुपा निर्माणमा विभिन्न अन्नपातको प्रयोग गरिएको छ ।
जनजाती अगुवा तथा स्तुपा ब्यवस्थापन सदस्य फुर्वा छिरिङ लामाले भने, ‘विभिन्न धातुदेखि अमेरिकाबाट सहयोग भएको झण्डै २८ टन किताब मात्रै स्तुपा निमार्णमा प्रयोग गरेका छौँ ।’
स्तुपा निर्माणमा सरकारी तथा निजि क्षेत्रबाट पनि सहयोग भएको थियो । मुगुको रारा हुँदै जुम्लाको खलंगा पुगेका पर्यटकका लागि यो स्तुपा अवलोकनका लागि रोजाई बनिरहेको छ ।
शान्ति स्तुपाले यहाँको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने भन्दै स्तुपाको दिगो संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।
महतको शालिक अनावरण
बुधबार नै मन्त्री अधिकारीले पुर्व शान्ति तथा पुन निर्माण राज्य मन्त्री एंव तत्कालिन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य स्वर्गिय डिल्ला बहादुर महतको शालिक अनावरण गरेका छन् ।
करिब साढे १३ लाखको खर्चमा शालिक निर्माण गरिएको शालिक अनावरण गरेका हुन ।
जुम्लामा शान्ती स्तुपा उद्घाटन संगै पर्यटन चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ ।
उद्घाटनका क्रममा सयौ धर्मगुरु तथा मुगाली समुदाय तथा पर्यटकहरुको सहभागिता थियो ।
जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट
बिहीबार १५ कार्तिक २०७५